China oluzenzekelayo Ukupakisha Machine mveliso kunye nabenzi | TUBO
Steel Tube & Pipe oluzenzekelayo ukupakisha Machine:
Oluzenzekelayo ingqokelela kunye wayibopha Machine
Umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo usetyenziselwa ukuqokelela, ukufaka umbhobho wentsimbi kwii-angles ezi-6 okanye ezi-4, kwaye uzibuthe ngokuzenzekelayo Isebenza ngokuzinzileyo ngaphandle kokusebenza ngesandla. Ngelo xesha, ukuphelisa ingxolo enkqonkqoza ukothuka imibhobho yentsimbi. Ukupakisha kwethu kunokuphucula umgangatho wemibhobho kunye nokusebenza kakuhle kwemveliso, ukunciphisa iindleko, kunye nokuphelisa ingozi enokubakho yokhuseleko.
1.Ukugcina nokuPakisha NGOKUZENZEKELAYO.
Ityhubhu umphezulu 2.Perfect.
3.Ukusebenza okungaphantsi, amandla okusebenza asezantsi.
Umsebenzi ozenzekelayo, ingxolo esezantsi.
Imibhobho ihanjiswa iye kwindawo yokupakisha yitafile yokuphela:
Iipayipi ezi-1 zibuyela kumatshini wokupakisha
Imibhobho iya kuguqulwa iye kumatshini wokupakisha wesixokelelwano sothutho ngesixhobo sombhobho ojika isixhobo kwaye emva koko isiwe kwindawo yokubala yombhobho;
Ukubala kwepayipi kunye nokufumba
Inkqubo inesicwangciso esimiselweyo sokuba zingaphi iziqwenga zemibhobho eziya kufuna inyanda ngobukhulu obahlukeneyo, emva koko inkqubo iya kuthumela iodolo kumatshini wokubala nasekuqokeleleni umaleko wemibhobho ngokobume kude kube kuqokelelwe imibhobho eyaneleyo device isixhobo esiqokelela umbhobho siya kuhamba ezantsi ukuphakama komaleko omnye xa kuqokelelwa umaleko omnye wemibhobho kwaye utyhalelwe kwisixhobo sokuqokelela ； kukho isixhobo esinye sokulungelelanisa isiphelo esiphelweni esinye;
Yonke inyanda yemibhobho iya kusiwa kwindawo yokubopha yimoto ehambayo, emva koko isixhobo esiqokelelweyo siza kubuyela kwindawo yokuqokelela silinde inyanda entsha;
Isixhobo sokubopha esizenzekelayo
Isixhobo sokuxhoma esizenzekelayo siza kusebenza njengesixhobo esimiselweyo sokubopha ibhanti inyathelo ngenyathelo; inkqubela phambili yile: umatshini wokubopha uya kuhla uye kwindawo yokubopha kwaye uqhakamshele umaleko ophezulu weemibhobho, ijelo elikhokelayo lebhanti liya kuvala, intloko yokubopha iya kuthumela ibhanti, idibanise isiphelo sebhanti, emva koko iqinise ibhanti, ukubopha kunye ke usike ibhanti; emva kokuba ibhanti ekhokela ibhanti iya kuvulwa, intloko yokubopha iya kubuyela kwindawo yoqobo kwaye ilungiselele ukubopha okulandelayo;
Iipayipi ezihlanganisiweyo ziya kuthuthwa zisiwe kwindawo yokugcina ngesixhobo esithuthayo sokuhambisa, imoto ehambayo iya kubuya ilinde inyanda elandelayo;
Indawo yokugcina iya kugcina iinyanda ezintathu kwaye iya kusiwa kwindawo yemibhobho egqityiweyo ngendwe;
Ukuhamba ngebhayisikile: yonke inkqubo iya kulawulwa yi-PLC yamashishini ngokuzenzekelayo, ikwanomsebenzi wolawulo olwenziweyo kunye noluzenzekelayo ukuqinisekisa imveliso eqhubekayo kunye nokusebenza okuzinzileyo;
Egqithileyo I-ERW 219mm Tube Mill
Okulandelayo: ERW 32mm Tube Mill
Oluzenzekelayo Pipe Ukupakisha Machine
Oluzenzekelayo Steel Pipe Ukupakisha Machine
Oluzenzekelayo Tube Ukupakisha Machine
Pipe oluzenzekelayo Machine Pipe Ukupakisha